China Painting robhoti HY1050A-200 Mugadziri uye Mutengesi |Yunhua
2000mm ruoko kusvika uye 50kg mutoro ndiwo maviri akakosha maficha eiyo modhi.Inogona kushandiswa Kubata, Palletizing uye Depalletizing, Sarudza uye nzvimbo, nezvimwe.
Iine maitiro sepazasi:
-Big ruoko kusvika: 2000mm;
-Mutoro mukuru: 50kg;
-Multi-pose: 6 DOF;
-Easy Chirongwa uye Chengetedza;
Isu tinopa robhoti yeindasitiri inogona kupfapfaidza pendi kana kupfapfaidza mamwe pendi.Kana yanyatsorongwa, robhoti rokupenda reindasitiri rinogona kuisa zvinhu pasina kusiya madrip, kusawirirana, kupfapfaidza, nezvimwewo. Marobhoti ekupenda maindasitiri anogona kupa mukana wakasiyana-siyana.Haisi chete maoko erobhoti akatetepa uye anosvika kure, asi marobhoti anogona kuisirwa munzvimbo dzakasiyana siyana (madziro, sherufu, njanji) zvichibvumira kunyange kushanduka kukuru.
Painting marobhoti anoshandiswa zvakanyanya mumadhipatimendi ekugadzira hunyanzvi senge mota, zviridzwa, midziyo yemagetsi, uye enamel.Robotic pendi uye coating inopa huwandu hwakawanda hwezvakanakira,kusanganisira:
1.Kuchengetedzwa kwakachengeteka munzvimbo dzine ngozi dzekushanda kwekupenda
2.Consistent robotic pendi application inoderedza zvakanyanya kutambisa zvinhu
3.Higher chigadzirwa chinokurumidza uye chibereko
4.Easy kushanda uye kuchengetedza
Painting for Aluminium cast
Aluminium Basin Painting
Mudhudhudhu Oiri tanker chivharo Painting
Q1.ndeupi modhi inogona kushandiswa kugadzira?
A. Yedu nhanhatu axis uye 4 axis robhoti inogona kushandiswa kugadzira, Kufanana neHY1020A-168, HY1010A-143, nezvimwe.
Q2.Kuenzaniswa nemhando yakakurumbira, Sei ndichisarudza YOO HEART robhoti?
A. Chekutanga, Robhoti redu rekupenda rinoshandiswa pakushandisa izvo zvisina anti-kuputika zvinodiwa.uyezve aya mafekitori madiki nepakati asingakwanisi kuwana mari hombe yerobhoti otomatiki.
Zvadaro, isu tine yakawanda chaiyo yekushandisa pakupenda uye kuwana yakawanda yakanaka wongororo kubva kune mutengi, Izvi zvakanaka ruzivo zvinotibatsira kupa mhinduro dzakanaka dzekupenda.
Wadii kutisarudza isu kana tichikwanisa kupa mhinduro yakanaka uye mutengo wakanaka?
A. Kudzidzira, unogona kuuya kufekitari yedu kuti uwane kudzidziswa kwakadzama.Kana uchida murume wedu kumafekitari ako kuti adzidziswe, mari dzese dzinenge dziri pauri.Ehe, isu tinokwanisa kupa kumwe kutsigirwa kure, kuti iwe ugone kuziva kumwe kushandiswa kwerobhoti.
Q4.Ndinogona kuva shamwari dzako chete mumunda wePainting?
A. Chokwadi, kana iwe chete wang kuva nebhizimisi mukupenda robhoti, tinogona kutaura pamusoro peizvi.
Q5.kana ndine pendi application, ndingatanga sei?
A. unogona kutanga wandiudza chaizvo zvaunoda?Kana iri mhinduro yakakwana yekupenda uye kupeta kana kungoda kuti tipe robhoti + pendi muchina + wependi torch.Nyanzvi yedu inokupa mazano nezve purojekiti yako.
Zvakapfuura: Palletizing robot
Zvinotevera: Robhoti rokupenda